श्रीमतीको अन्तै लसपस बढेपछि श्रीमान् डिप्रेसनमा, डाक्टरकोमा जाँदा डाक्टर नै श्रीमतीका प्रेमी निस्किए ! – live 60media
श्रीमतीको अन्तै लसपस बढेपछि श्रीमान् डिप्रेसनमा, डाक्टरकोमा जाँदा डाक्टर नै श्रीमतीका प्रेमी निस्किए !
श्रीमतीको घर बाहिर अन्य पुरुषसँग लसपस बढेपछि एक ब्यक्ति डिप्रेसनमा गएका छन् । ती ब्यक्तिको आनीबानी स्वभावमा परिवर्तन भएपछि श्रीमतिले उनलाई डाक्टर भेट्न सल्लाह दिन्छिन् । समस्या लिएर ती ब्यक्ति जुन डाक्टरकहाँ गए, त्यही डाक्टर नै श्रीमतिको प्रेमी निस्केपछि उनी थप समस्यामा परेका छन् । अमेरिकाको ओरेगनका ती व्यक्तिले अहिले ती डाक्टरसँग झण्डै २० लाख डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अदालतमा मु द्दा हालि दिएका छन् । ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****,
पिर्सन टोन नामका ४७ वर्षका ती व्यक्तिले डा। रोनाल्ड रोसेनविरुद्ध ‘व्यवसायिक लापरवाही’को आरोप लगाएका हुन् । टोनका अनुसार उनी, उनकी श्रीमती र उनका दुई छोराछोरी डा। रोसेनका बिरामीहरु थिए । २०१५ देखि २०१८ सम्म उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच डा। रोसेनले नै गर्थे । यही अवधिमा डा रोसेनको टोनकी श्रमितीसँग लसपस सुरु भयो । श्रीमतीको यस्तो कदमका कारण टोन डिप्रेसनमा गए र नोभेम्बर २०१८ मा उपचारको लागि डा। रोसेनकहाँ नै गए ।
डा। रोसेनले टोनलाई गाँ जा खान सिफारिस गरे र श्रमितीसँग ब्यवहार कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने विषयमा काउन्सिलिङको लागि समेत बोलाए । डाक्टरको समय लिएर घर गइसकेपछि कुराकानीको क्रममा टोनकी श्रमितीले आफ्नो ती डाक्टरसँग केही समयदेखि लसपस भएको खुलासा गरिन् ।
टोन र उनकी श्रमितीको ब्यवहार झनै बिग्रियो र अन्ततः उनीहरुले २०१९ मा डिभोर्स गरे । रोसेनका कारण टोनले मानसिक र भावनात्मक तनावका साथै सामाजिक रुपमा समस्याको सामना गर्नुपरेको र उनको वैवाहिक सम्बन्ध समेत बिग्रिएको अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा जनाइएको छ ।***यो समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
← भाइरल बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, उनका बेहुला झनै रमाइला (भिडियो)
रमेश प्रसाई र जीवन बिष्टको पुरानो भिडियो अहिले भयो भाइरल (भिडियो सहित) →